Hitachi Kokusai မှ Z-HD5500 ကင်မရာများသည် 'ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်' IMAG နှင့် Calgary ၏ပထမဆုံးမဟာမိတ်ဘုရားကျောင်းအတွက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Hitachi Kokusai ကနေ Z-HD5500 ကင်မရာများကို Calgary ၏ပထမဦးဆုံးမဟာမိတ်ဘုရားကျောင်းအဘို့ '' ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် '' ပုံရိပ်နှင့်လွှအရည်အသွေး Enable
ခြွင်းချက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဘက်စုံသုံးပေးနေချိန်မှာနယူး HDTV ကင်မရာများကုန်ကျစရိတ်-ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ LED-lit ပတ်ဝန်းကျင်၏ဗီဒီယိုကိုရှာမှီးစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှား
Woodbury, နယူးယော့, သြဂုတ်လ 2, 2019 - Calgary အတွက် 80 နှစ်အရွယ်ပထမဦးစွာမဟာမိတ်ဘုရားကျောင်း (FAC), အယ်လ်ဘာတာတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက် optimized, ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှစ်ခုကွဲပြားတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကို feeds တွေကိုထုတ်လုပ် - ပုံရိပ်ကိုချဲ့ (Image) On-site ကိုဧည့်သည်များအတွက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအတှေ့အကွုံကြွယ်ဝစေခြင်းငှါ၎င်း, လူတစ်ဦးအတွက်တက်ရောက်ရန်နိုင်ခြင်းအသငျးတျောကိုရောက်ရှိဖို့အွန်လိုင်း streaming များ။ ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦများကိုအလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး HD, FAC ကနေလေး Z-HD5500 ကင်မရာများဝယ်ယူ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd တိကျစွာကိုအသင်းတော်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်နဲ့ LED အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုမျိုးပွားနေချိန်မှာ (Hitachi Kokusai) နှစ်ဦးစလုံး application များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုကိုဖမ်းယူဖို့။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3000 ကလူကိုအသင်းတော်ရဲ့သုံးစနေနေ့ညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေနံနက်န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုတက်ရောက်ရန် FAC Calgary မှာတစ်ခုချင်းစီကိုတနင်္ဂနွေကိုစုသိမ်း။ အဓိကအဆင့်မြှင့်ပဏာမ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့အိုမင်း, စံ-ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် Analog စကိရိယာများကိုအစားထိုးခြင်း, ဘုရားကျောင်း Z-HD5500s မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်မပထမဦးဆုံးမှာ Z-HD5500 ကင်မရာအထုပ်ကိုမြင်သောအခါ NAB ပြရန်ငါကကျွန်တော်လိုအပ်အတိအကျဘာဖွစျကွောငျးကိုချက်ချင်းသိတယ်, "FAC နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာရှင်ပေါလု Nadeau-Bonilla ကဆိုသည်။ "ဒီကင်မရာများကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသန့်ရှင်းရာဌာန၌အကြှနျုပျတို့၏လက်ရှိစတူဒီယို-စတိုင် application များအတွက်အဖြစ်အနာဂတျမှာ ENG-စတိုင်ဗီဒီယိုအားဝယ်ယူဘို့ထိုသူတို့သုံးနိုငျ, ဒါစွယ်စုံဖြစ်ကြသည်။ စျေးနှုန်းအချက်လည်းဆွဲဆောင်မှုခဲ့ပေမယ့်ငါ့အဘို့အကြီးမားဆုံးအရာသူတို့ဘုရားကျောင်းကမ်ဘာပျေါတှငျ LED မီးအလင်းရောင်နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တချို့လျော့နည်း-စျေးကြီး LED မီးလုံးရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဤကွဲပြားခြားနားလ်တာ၏ကွဲပြားရဲ့ Refresh နှုန်းထားများရှိနေသော်လည်းတုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့ video များကိုမယ်လို့ကင်မရာငျြတယျ။ "
System Integration အသုံးချ Electronics ကထောက်ပံ့ခြင်း, Hitachi ကင်မရာများသူတို့ရဲ့ LED မီးအလင်းရောင်မျိုးပွါးအဘို့အ Nadeau-Bonilla ရဲ့မြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါပြီ။ "ငါသည် Z-HD5500s သည့် LED မီးလုံး၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကို installed သူတို့ကိုသုံးပြီးစတင်တစ်ချိန်ကငါ ပို. ပင်သဘောကျခဲ့တယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်စနစ်နှင့် LED မီးအလင်းရောင်နှင့်အတူသူကငါ့ကိုသငျသညျအိမျတျော၌မြင်သောအရာကိုသင် screen ပေါ်မှာကိုမွငျလြှငျ, အထူးသဖြင့်အပြာရောင်ရောင်စဉ်အတွက်မကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအရာကိုသောအရောင်များကိုအခွံမာသီးကိုနှင်။ nice mauves သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအပြာအဖြစ်ဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Z-HD5500s ဒါအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, LED မီးအပြာ၏ကွဲပြားခြားနားသောတန်ချိန်တက်ကောက်နေမှာတကယ်ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့သင်သည်အဘယ်သို့ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာ screen ပေါ်မှာတွေ့မြင်သောအရာကိုဖြစ်၏။ "
ဗီဒီယိုကိုဒါရိုက်တာစယ် Moore က၏လမ်းညွှန်မှုအောက်, ဘုရားကျောင်းရဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းကဗီဒီယိုအဖွဲ့ကစင်မြင့်၏နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်ဘုရားကျောင်းရဲ့နှစ်ခု 24-by-13 ခြေလျင် Stewart က Filmscreen ရှေ့အနာဂတ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အွန်လိုင်း streaming များနှင့် Image များအတွက်သီးခြားဘဏ်ဍာဖန်တီးပေးပါတယ်။ "image အခန်းထဲမှာသူများပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ကူညီပေးနေအကြောင်း; streaming များမခန်း၌သူတို့အဘို့အပြည့်အဝအတှေ့အကွုံသယ်ဆောင်အကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ် "ဟု Nadeau-Bonilla ရှင်းပြသည်။
"ဂီတကိုကိုးကွယ်စဉ်အတွင်းအဘယ်အရာကို Image ပေါ်မှာင်စီးအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်တရားကိုဟောစဉ်အတွင်းသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနေသောခေါင်းစဉ်: အနီးကပ်-up, ဘေးထွက်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်စင်တာကကင်မရာအနေဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်အနီးကပ်ပေါင်းထဲမှာကျယ်ပြန့်ဆက်စပ်ရိုက်ချက်များပေါင်းစပ် စမ်းချောင်း "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်ချွန်ထက်ပုံရိပ်နှင့်အတူဘာသာရပ်အပေါ်ကောင်းတဲ့နှင့်တင်းကျပ်စွာရခွင့်ပြုသူတို့နှင့်အတူကြွလာတော်က "Z-HD5500s နှင့် Fujinon မျက်ကပ်မှန်။ အဆိုပါဗီဒီယိုဘက်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှု - လုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ "။
FAC Calgary ထံမှပစ္စည်းကိရိယာများကို ရွေးချယ်. Ross ကဗီဒီယို သူတို့ရဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် Carbonite တို့က Black 2S ခလုတ်အပါအဝင် HD upgrade, နှင့် Hitachi ကင်မရာများနှင့်ရော့စ် Dashboard ကိုဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပလက်ဖောင်းများအကြားတင်းကျပ်ပေါင်းစည်းမှုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ "သူကဗီဒီယိုသင်္ဘောသားအပေါ်လျော့နည်းအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေရာထူးများထဲမှရဲ့အဖြစ်ကရိပ်ကြိုက်နှစ်သက်သူကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲမယ့်" Nadeau-Bonilla ကဆိုသည်။ "လညျးမိမိကအခြားတာဝန်များကိုလုပ်နေစဉ်ပေါင်းစည်းမှုဟာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟူသောအရိပ်မှဒါရိုက်တာရော့စ် Dashboard ကိုသုံးပြီးကင်မရာများခွင့်ပြုပါတယ်။ "
အရေးအကြီးဆုံးကတော့သစ်ကင်မရာများရှိသောအသင်းတော် site ကို-On နှင့်အွန်လိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအားဝတျပွုများအတွက်အမြင်အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်အောင်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ့ဆုံရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်နှင့်အွန်လိုင်းကြည့်ရှုအရည်အသွေးနှင့်အတူ-bits မှစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါပြီ," Nadeau-Bonilla အကျဉ်းချုံး။ "ဒီ Z-HD5500s ကောင်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ "
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-02
ယခင်: JVC GY-HM250 Upgrade နဲ့အတူစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝပေါင်းစည်း Facebook မှတိုက်ရိုက်တီဗွီကင်မရာဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: Qligent IBC2019 မှာ Vision ၏စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းအတွက်ပေါင်းစည်းအကြောင်းအရာ Repurposing ပွဲဦးထွက်မှ